कोरोना महामारीका १०० दिन: शून्यबाट हामी कसरी आइपुग्यौं यहाँसम्म :: Setopati
कोरोना महामारीका १०० दिन: शून्यबाट हामी कसरी आइपुग्यौं यहाँसम्म
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत २९
लकडाउन बेला सुनसान काठमाडौंको सडक। तस्बिर: सेतोपाटी
(यो लेख हामीले गार्डियनमा प्रकाशित 'हन्ड्रेड डेज द्याट चेन्ज्ड द वर्ल्ड' मा नेपालको सन्दर्भ थपेर अनुवाद गरेका हौं।)
पुरानो सालको आखिरी दिन र नयाँ सालको पहिलो दिनमा पलभरको मात्र फरक हुन्छ। जे बदलिन्छ त्यो क्यालेन्डर हो, आममान्छेको जीवन सधैं उस्तै रहन्छ। तै पनि मान्छे त्यो एक दिनको पर्खाइमा यस्तरी व्यग्र हुन्छ, मानौं आनका तान केही फेरिनेवाला छ।
सन् २०१९ को आखिरी दिन मान्छेहरू त्यस्तै उत्साहमा थिए, नयाँ वर्ष र नयाँ दशकको स्वागत गर्न।
अघिल्लो दशक सिरिया गृहयुद्ध, आतंकवाद, शरणार्थी संकट, सामाजिक सञ्जालको भीडभाड, राष्ट्रवादको चर्को नाराबीच गुजारेका मान्छेलाई यसपालि नयाँ सालमा नयाँ परिवर्तनको आशा थियो। उनीहरू आतिशबाजी गर्दै उत्सव मनाउने तयारीमा थिए।
घडीको टिकटिकले सिंगो संसारलाई नयाँ वर्षतिर धकेल्दै थियो। त्यही बेला यस्तो घटना भयो, जसले आउँदो एउटा साल मात्र होइन, त्यसपछिका अरू कति सालहरूको दिशा र दशा बदल्दै थियो।
एक चिनियाँ वेबसाइटमा खबर आयो– औद्योगिक नगर वुहानको मासु बजार वरिपरिका क्षेत्रमा एउटा नौलो रोग फेला पर्‍यो। सामान्य रुघाखोकीबाट सुरू भएर निमोनियाको लक्षण देखाउने त्यो रोग अहिलेसम्म देखिएका भाइरलभन्दा फरक र भयानक थियो।
खबर आयो, हल्का खासखुस पनि भयो, तर कुनै खलबली मच्चिएन।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा वुहानबाट आएको सूचनालाई संसारको के कुरा, चीनले नै गम्भीर रूपमा लिएन।
आज १०० दिनपछि फर्केर हेर्दा त्यो रोगले विश्वव्यापी भ्रमण पूरा गरेको छ। संसारका १७ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने एक लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यसले धनी–गरिब, ठूला–साना, शक्तिशाली–कमजोर कसैलाई छाडेको छैन। बेलायती राजकुमारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म संक्रमित छन्। संसारका आधाभन्दा बढी जनसंख्या रोगबाट बच्न आ–आफ्नो घरभित्र कैद छन्।
डिसेम्बरको अन्तिम दिन राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदा सडकमा निस्केर आतिशबाजी गर्ने, रेस्टुरेन्टमा धूम मच्चाउने र घर–घरमा पार्टी गरेर उत्सव मनाउनेहरूले सायदै सोचेका थिए, अर्को वर्ष संसारभरिका सडक र रेस्टुरेन्ट रित्ता हुँदैछन्।
त्यस रात जे बदलियो, त्यो केवल क्यालेन्डर थियो!
वुहानको मासु बजारमा हरेक बिहान भीड लाग्थ्यो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन भने एकाबिहानैदेखि अफरा-तफरी मच्चिएको थियो।
प्रहरीले फलामे बार लगाएर बजार क्षेत्र छिर्न निषेध गरे। अन्तरिक्षयात्रीले लगाउने स्पेस–सुटजस्तै पोसाकमा आएका सरकारी कर्मचारीले त्यहाँका अन्तरकुन्तरबाट नमूना संकलन गरे। त्यसलाई प्लास्टिक झोलामा सिलबन्दी गरेर प्रयोगशाला लगे।
‘पक्कै सार्स हो, नभए त्यस्तै अर्को कुनै रोग होला, नर्सहरूलाई यसै बिरामी छुन नदिनू,’ एउटा सन्देशमा भनियो।
लगत्तै अर्को सन्देश आयो, ‘हात धुनू। मास्क लगाउनू। पञ्जा नलगाई बिरामी छुँदै नछुनू।’
दुई दिनभित्र सिंगापुर र हङकङले पनि सीमावर्ति क्षेत्रमा चीनबाट आएका यात्रु परीक्षण गर्न थाल्यो। यसले सुरूका दिनमा सिंगापुर र हङकङलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्‍यो। तर, पछिल्लो समय यहाँ पनि भाइरस संक्रमण बढेको छ।
उता वुहानमा नयाँ रोगको ‘हल्ला फैलाएको' भन्दै आठ जना पक्राउ परे। पहिलोपटक रोग पहिचान गरेर सहकर्मीहरूलाई सूचित गरेका चिनियाँ डाक्टर ली वेनलियाङ पनि प्रशासनको केरकारमा परे। उनले यसलाई सामान्य रुघाखोकी नभई, सार्सजस्तै कुनै भाइरल रोगको शंका गरेका थिए।
यसबीच इरानको तेहरानमा जहाज दुर्घटना भयो। इरानले प्राविधिक गडबडी भएको दाबी गर्‍यो। तर, सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटा र भिडिओका आधारमा धेरैले उक्त जहाज क्षेप्यास्त्रको निशाना बनेको आरोप लगाए। यो घटनाले वुहानको कोरोना भाइरस आतंक केही दिन ओझल पर्‍यो।
पछि एउटा अध्ययनले वुहानमा कोरोना बिरामी हरेक साता दोब्बर भएको सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसैको भोलिपल्ट चिनियाँ डाक्टर ली वेनलियाङ आफैं संक्रमित भए। उनमा पनि कोरोनाको लक्षण देखियो।
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसका बिरामी बढेपछि रातारात अस्पताल बनाइँदैन। तस्बिर: एनपिआर
वुहानको हुशेनशाङ अस्पताल सुरू हुनु एक दिनअघि। तस्बिर: एनपिआर
वुहानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने कि नल्याउनेबारे काठमाडौंमा चर्चा सुरू भयो। त्यही बेला वुहानबाट आएका एक विद्यार्थी ज्वरो आएर, खोकी लागेर टेकु अस्पताल जँचाउन गए। उनलाई केही दिन भर्ना गरियो। घाँटीको र्‍याल झिकेर कोरोना परीक्षण निम्ति हङकङ प्रयोगशाला पठाइयो।
जनवरी २४ मा हङकङ प्रयोगशालाबाट आएको रिपोर्टले उनलाई कोरोना भएको पुष्टि गर्‍यो।
यो घटनापछि वुहानमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने बहसले तीव्रता लियो। उता चीन सरकारले वुहान ‘लकडाउन’ गर्‍यो। हवाई सेवा र रेल्वे बन्द गरिए। एक करोड दस लाख जनसंख्या भएको वुहानको जनजीवन ठप्प भयो।
त्यसको दुई दिनअघि डाभोस भ्रमणमा रहेका ट्रम्पलाई पहिलोपटक सञ्चारकर्मीहरूले कोरोनाबारे प्रश्न गरे- के तपाईं सम्भावित महामारीबाट चिन्तित हुनुहुन्छ?
भोलिपल्ट चीनले लकडाउन विस्तार गरेर साढे ५ करोड नागरिकलाई घरबाट निस्कन निषेध गर्‍यो। राष्ट्रपति सी चिनफिङले देशमा ‘जटिल परिस्थिति’ सिर्जना भएको सार्वजनिक रूपले स्वीकार गरे।
कोरोना महामारीले सुनसान इटालीको मिलान। तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्स
यसबीच अमेरिकाले हालै चीन भ्रमण गरेका विदेशी नागरिकलाई प्रवेश निषेधको घोषणा गर्‍यो।
डब्लुएचओ महानिर्देशकले कोरोना विश्वव्यापी रूपले फैलिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘अहिले यसको गति सुस्त छ, तर विस्तारै जटिल हुनसक्छ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवश्यकता भने औंल्याएनन्।
केही दिनमै न्यू ह्यामसायरमा आयोजित एक र्‍याली सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘महामारी छिट्टै साम्य हुने’ दाबी गरे।
सेतोपाटीले अघिल्लो दिन शनिबार बिहान वुहानका विद्यार्थीसँग कुरा गर्दा शरीरको तापक्रम ३७.३ डिग्रीभन्दा माथि देखिए चीन सरकारले जान नदिने बताएका थिए। यसले धेरै विद्यार्थी तापक्रम बढ्ला कि भनेर डराएका थिए।
वुहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र भवनमा राखियो। क्वारेन्टाइन अवधिभर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनीहरू कसैमा कोरोना देखिएन।
वुहानबाट आएका सबै नेपाली विद्यार्थी क्वारेन्टाइन पूरा गरी घर फर्किसकेका छन्।
वुहानबाट आएका नेपाली विद्यार्थी दुई साताको क्वारेन्टाइन पूरा गरेर घर फर्कंदै। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
यसै साता इरानले पनि आफ्नो धार्मिक सहर कोममा दुई जना बिरामी भेटिएको पुष्टि गर्‍यो।
उता मिलानमा भएको च्याम्पियन्स लिगमा एट्लान्टाले स्पेनिस क्लब भ्यालेन्सियालाई ४–१ ले पराजित गर्‍यो। खचाखच सान सिरो स्टेडियम प्रत्येक गोलसँगै जुरुक्क उठ्थ्यो। खेल हेर्न इटालीको बर्गामो सहरका झन्डै एकतिहाइ जनता उर्लिएका थिए। हजारौं स्पेनी लामो यात्रा गरेर आएका थिए।
यसबीच इरानको मृत्यु संख्या चीनबाहेकका मुलुकमा सबभन्दा बढी भयो। त्यहाँ कम्तिमा १२ जनाले ज्यान गुमाएको सरकारले पुष्टि गर्‍यो।
उता अमेरिकामा १४ औं बिरामी फेला पर्‍यो। त्यति बेला ट्रम्प भारतबाट ट्वीट गर्दै थिए, ‘अमेरिकामा कोरोना नियन्त्रणमा छ। सेयर बजारको स्थिति पनि राम्रो देखिन्छ।’
इटालीको रोममा कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल ल्याइँदै। तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्स
डब्लुएचओले कोरोना भाइरसलाई ‘कोभिड–१९’ भनी वैज्ञानिक नाम दिँदै विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो।
‘आज लकडाउन गर्‍यौं भने पनि भोलि कुनै दिन महामारी फैलिनेछ। बरू जनजीवन सामान्य राख्यौं भने भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुँदै जाला,’ बेलायतको प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार सर पेट्रिक भालान्सले बिबिसीसँग भनेका छन्।
अस्ट्रेलियाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्कन आह्वान गर्‍यो। फ्रान्सले मोटरसाइकल चलाउन रोक लगायो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा ४ करोड जनसंख्यालाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरियो।
यसबीच बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो अघिल्लो नीति संशोधन गर्‍यो। प्रतिरोधात्मक क्षमता कुरेर बस्दा बेलायतमा मात्र ५ लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुनसक्ने आकलनपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन हडबडाए।
सुनसान लास भेगस सडक। तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्स
शारजाँह एयर अरेबियाको उडान नम्बर जी-९५३७ बाट काठमाडौं आएका उनी होटलमा बसेका थिए। अघिल्लो दिन ज्वरो आएपछि टेकु अस्पताल गएका थिए। अस्पतालले नमूना परीक्षण गर्न पठाएकोमा राति १२ बजे पोजेटिभ नतिजा आयो।
अमेरिकामा मृतक संख्या ६ हजार पुग्यो। न्यूयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा फिल्ड अस्पताल स्थापना गरियो। ट्रम्पले भने, ‘आगामी दुई साता पीडादायक हुनेछ।’
चीनमा महामारी सुरू भएपछि पहिलोचोटि एक जना पनि बिरामीको मृत्यु भएन। चीनले केही सहरमा सतर्कतापूर्वक लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्‍यो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २९, २०७६, ०७:३०:००
ट्रकले ठक्कर दिँदा साइकलमा सवार श्रीमान-श्रीमतीको मृत्यु